Mashruuca Score – WASAARADDA MAALIYADDA
Waxa u qabsoomay mashruuca Score ee 2016
Dawlada federalka ee Somalia waxay hogaaminaysa dadaal qaran taaso dib loogu soo noolaynayo ganacsiga qaybaha gaarka loo leeyahay iyo dhaqaalaha taaso loo marayo habab loo meeldayay oo loola jeedo in kor loogu qaado maal gelinta ganacsiga gaarka loo leeyahay iyo shaqo abuuris. Barnaamijka marka magaciisa lasoo gaabiyo ee( Score) wuxuu utaaganyahay mid kamida istiraatijiyada dawlada ay u adegsanayso inay dhiiri galiso maal galinta ganacsiga gaarka looleeyahay ee wadanka.
Mashruuca waxaa fulinaya Dawlada Federalka iyado laga dhax sameeyay unug mashruuca fuliya wasaarada maaliyada ee Muqdishu. Unuga mashruuca fulinaya waxaa taageraya koox hawl wadeena ah oo Bangiga aduunka ka tirsan oo u ka midyahay , xiriiriyaha mashruuca iyo lataliyal xaga farsamada oo kala jooga ( Washinton iyo Nayrobi). Wasaarada Maaliyada waxay leedahaya masuuliayada guud ee xiriirinta iyo fulinta qaybaha mashruuca ee kala ah 1 iyo sadex.Unuga mashruuca fulinaya wuxu masuul kayahay hawl-maalmeedka mashruuca heer federal ee labadan qaybood (1&3).
Unuga shaqada fulinaya wuxuu ka koobanyahay xiriiriye, iibka khabir ku takhasus leh iyo maaraynta dhaqaalaha khabiir ku takhasus leh.Unuga mashruuca fulinaya wuxuu laxiriraya wasaaradaha mashruuca ka faaidaysanaya iyado u usii marayo shaqaale wasaaradahaas mashruuca wakil uga ah.Shaqaalahaas la doortay waa kuwa wakhti buuxa ushaqaynaya dawlada ama ah shaqaalaha rayidka.habkan waxa loogu talagalay in kor loo qaado hanashada dawlada ee mashruuca iyo in ladhiso awood gudaha oo dawlada ah oo shaqadan sii wada haduu dhamaado mashruuca . Wasaarada walba iyo Bangiga Dhexe waxay dooranayaan qofki shaqalohooda aha oo mashruucan wakil uga noqonaya.
Ujeedooyinka hormarineed ee mashruuca Score:
In la hormariyo jawi ogolanaya ganacsiga garka loo leeyahay iyo dhaqaalaha in la hormariyo
In kor looqaado maal galinta ganacsiga gaarka loo leeyahay iyo shaqo abuur
Xafladi daah furka mashruuca Score
Xaflad lagu daahfurayo mashruuca Score ayaa waxay ka dhacday garoonka diyaaradaha ee Muqdisho waxaan isugu yimid xubno sare oo Dawlada Federaalka ka tirsan oo ay ku jiraan wasiirka maaliyada, wasiirka dakadaha, wasiirka ganacsiga, wasiirka beeraha iyo wakillo ka socday Bangiga dhexe, rugta ganacsiga ee Somaliyeed, bulshada rayidka iyo kooxda mashruuca Score ee Bangiga aduunka oo uu hogaaminayo madaxa mashruca Suhail qasim. Sido kale waxa jiray wafdi kasocday Puntland oo u hogaminayo wasiirka Maaliyada iyo madaxa xafiska shaqalaha ee madaxwaynaha Puntland.
Wasiirka Maaliyada Mudane. Maxamed Ibrahim ayaa furay xaflada wuxuuna yiri sidan” barnaamijka lagu hormarinayo ganacsiga gaarka loo leeyahay wuxuu qayb muhiim ah ka yahay habka xalinta khilaafadka iyo yaraynta saboolnimada ee Somaliya.iyado la aqoonsanayo saamaynta iyo jiritaanka ganacsiga gaarka loo leeyahay ee Somaliya, in diirada lasaaro horumarinta ganacsiga gaarka ah waxay wax ka taraysa in nabada labaahiyo iyado hab shaqo abuuris ah, dakhli abuur ah iyo in la hormariyo in adeeg la helo.mashruuca score door muhim ah ayuu ka ciyaari dona qaybtan waana horumar an soo dhoweynayno”.
Suhail Qasim, madaxa hawl wadeenada mashruuca Score ee Bangiga Aduunka ayaa hadalka bilaabay wuxuuna soo dhoweeyay ka qaybgalayaashi kulanka. Wuxu si gaaban usoo bandhigay marxaladihi lagu aasaasay mashruca wuxuna sharxay masuuliyada dawlada ay ku lahayd o ay kamid yihiin bilaabidi mashruuca ,so gabagabaynti wadahadalka iyo saxixida heshiis sharci ah. Wuxu sidoo kale ka hadlay qaababka hirgelinta mashruuca iyo doorka looga baahanyahay inu cayaaro unuga hirgelinta mashruca ee hada la aasaasay, hawl wadeenada dawlada ee mashruca iyo gudiga joogtada ah ee mashruuca.
Kulanka gudiga joogtada ah ee mashruuca Score
Kulanka gudiga joogta ah ee mashruca waxaa la qabtay 18 sebtember 2016 waxa laguna qabtay holka shirarka ee AMISOM ee Moqdishu, Somalia. Gudoomiyahay gudiga Mudane Maxamed Aden Ibrahim, Wasiirka Maaliyada aya kulanka ku baaqay abaare 10.10 am ee subaxnimo. Wasiirka ayaa ka faaidaystay inu kusoo dhoweeyo ka qaybgalayashi kulanki ugu horeeyay ee gudiga joogta ah ee mashruca Score. Wuxuu umahadceliyey inta joogta wakhtigi ay galiyeen inay kasoo qaybgalaan kulanka.Waxa sii dheer, wasiirku wuxu garwaaqsaday oo u bogaadiyay taagerada joogtada ah ee Bangiga Aduunka iyo dhamaan deeq bixiyayaasha kale ee ka go’an inay gargaaran Dawlada Federalka ee Somaliya.
Madaxa wafdiga Banigaga Adunka Mudane Suhayl Qasim, bilawgi hadalkisi wuxu cadeeyay doorka gudiga joogtada ee mashruuca iyo muhiimada taladeeda iyo wax ku biirinteeda. Wuxu sidoo kale hoosta ka xariiqay in guduga joogtada ah e mashruuca ay ka talo keni karaan daah furnaanta iyo fulinta mashruuca.
Agendaha ugu way nee kulanka wa
In la isla socodsiyo meesha uu marayo qaybta 1 ee mashruuca fulintisa iyo sidu u shaqaynayo
In la isla meel dhigo caqabadaha jira ee mashruuca hortaagan fulintisa iyo in la helo talooyin ku aadan sidi loo turxaan bixin laha caqabadahaas
Agendaha 1: In la isla socodsiyo meesha uu marayo qaybta 1 ee mashruuca fulintisa iyo sidu u shaqaynayo
Xiriiriyaha waaxda fulinaysa mashruuca ayaa kulanka kusoo bandhigay hordhac iyo taarikhda Score iyo ujeedoyinka. Xiriiriyaha wuxu ka waramay iibka qandarasyada adeegyada latalin ee ku hoos jira qaybta 1 ee mashruuca ee kala ah daraasada suuqa ee adeega maaliyadeed ee Somaliya, khabiirka sharci iyo adeega casriyeynta dakada.
Agendaha 2.In la isla meel dhigo caqabadaha jira ee mashruuca hortaagan fulintisa iyo in la helo talooyin ku aadan sidi loo turxaan bixin laha caqabadahaas
Cabdishakur Maxamed, lataliye sare/ahna uqaybsanaha mashruuca ee Bangiga dhexe aya cadeyay doorka uu Bangiga dhexe kaga jiro mashruuca Score. Wuxu ka hadlay qabyta 1 ee mashruca ee kujira qorshaha iibka kaso ku hoos jiraan adegyo uu ka faaidaysanayo Bangiga dhexe.
Mudane Abukar Maxamed Dahiye, xoghayaha joogta ah ee wasaarada Ganacsiga iyo warshadaha ay aka faalooday qandaraska adeega khabirka sharciga, wuxuuna soo jeediyay in booska qandaraaska laga dhigo Somali khabir ah, maadama ay wax badan ka ogyihiin sharciga wadanka e Somaliya
C/qadir Khalif, xiriiriyaha PDO/SMEF aya ka hadlay daah furka xaflado ka dhacay Garowe iyo Hargeysa . 8 kulan ayaa lagu qabtay hoolalka shirarka ee Puntland iyo Somaliland.
In kabadan 200 oo bixiya adeega horumarinta ganacsiga ayaa qanadaraaska soo codsaday. Kala xulidi iyo dhab u egidi baa socota. 50 codsatay SME aya lahaya say u helaan taakulayn farsamadeed iyo adeegyada hormarinta ganacsiga ayu yiri.
Maxamed Shire, xiriiriyaha DAI aya soo ban dhigay wax qabadki laga gaaray mashruuca qaybta SBCF. wuxuu ka hadlay caqabadaha soo wajahay SBCF ee laxirirta dib udhaca konfurta Somalia ee fulinta mashruuca
Ben Bensuku, ku xigeenka mashruuca ayaa sheegay in mashruuca uu meel fican marayo uuna jiri karo kala duwanaansho yar o xaga fahanka ah o u dhexeya dawlada iyo fuliyaasha mashruuca qaybtiisa SBCF. laakin in la wada hadlo wuxu keenaya is faham laba dhinaca.
David wuxuu sheegay in SBCF usoo wajahayay caqabado ka hortagan inu usocdo horay gar ahan qaybta konfurta kana imaanaysa gudiga SAP oo aan la socon qaabku mashruuca ushaqaynayo. David sido kale wuxuu sheegay in loo baahanyahay wada shaqayn xubnaha SAP iyo DAI, iyo kuwa fuliya mashruuca SBCF.
Mudane C/rashid Maxamed Axmed, wasiirka wasaarada ganacsiga iyo warshadaha ayaa soo xiray kulanka wuxuna markale u mahad celiyey Bangiga aduunka iyo dhamaan deeq bixiyayaashi taagerida an kala go’a lahay ee dalwada Federalka Somaliya lagarab taaganyihiin. Wuxuu sheegay in dhamaan shirkadaha soo codsanaya qandaraasyada dawlada ay iska diiwangaliyaan wasaarada ganacsiga iyo warshadaha. Wuxuu sidoo kale shegay in ka wadahal dheeri ah mashruuca qaybtiisa SBCF loo baahanyahay in la sameeyo laguna balansanyahay kulan kale horanti bisha tobnaad
4 . Ilaa iyo hada heerka uu marayo iibka guud ee mashruca Score
Habka iibka ee adeegyadan la talin waa la soo gabagabeeyay, heshiskina waxaa lasiiyay qandaraaslihii guulaystay oo soo bandgihay farsamadi iyo qiimihi ugu ficna. Adeegyada latalin waa sidan soo socota
Daraasaynta suuqa ee adeega maaliyadeed ee Somaliya
Adeega khabirka sharciga
Adeega casriyeynta dakada
Shirkadaha guulaystay ayaa loo baahanyahay inay bilaaban shaqada horanta bisha 1aad e 2017 waxayna lakala shaqaynayan hay’adaha dawlada e mashruca ka faaidaysanaya o ay kamidyihin Bangiga Dhexe, Wasaarada ganacsiga and warshadaha iyo wasaarada dakadaha iyo gaaddidka bada.
Daraasada suuqa wa in lahelo baahida iyo saadka dhiman ee maaliyadeed ee Somaliya lagana talo helo xadiga iyo nooca siyaasadeed ee dawlada ugu lug yeelanayso qaybta maaliyada iyo sido kale talooyinka sharciyaded iyo mid kormeer ee loo jeedinayo Bangiga dhexe. Gaar ahaan, daraasadan waxay baaraysa siyaasad iyo fursad maaligalineed lahelo o macquula taaso dawlada ayadoo usii maraysa Wasaarada Maliyada iyo Bangiga Dhexe ay samaynayso si kor loogu qaado maali galinta ganacsiga gaarka looleeyahay iyo shaqo abuur.
Adeega khabiirka sharciga waa in la sameeyo dib u eegis sharci iyo baaritaan sharciyada
lasoo xulay, foomamka iyo canshuuraha.Iyado kusalaysan wixi kasoo baxa baaritaanka iyo dib u eegida.khabiirku wuxu soo saaraya sharciyada dhiman wuxuna bixinaya talooyin. Khabirku waxa laga rajaynaya inu bixiyo tababaro iyo hawlo awooda lagu dhisayo saraakisha hay’adaha ay khusayso barnaakijkan.
Adeega lagu casriyeynayo dakada wuxu keenaya in dakada dib loo fiiriyo, qorshe wayn in dakada lo sameeyo lana qiimeeyo ka qaybgalka ganacsiga gaarka looleeyahay hawlaha dakada iyado dib loo eegayo say usamaysanyihiin hay’adaha dakada, shuruucda adeegyada dakada, u hogaansananta iyo fulinta heshiisyada caalamiga ah ee badbaadada, amniga iyo ilaalinta deegaanka.